Gwaro Rakarerutswa reChiga Chekodzero Dzevanhu (Simplified Declaration of Rights in Shona) | veritaszim
Gwaro Rakarerutswa reChiga Chekodzero Dzevanhu (Simplified Declaration of Rights in Shona)
Chii chinonzi Chiga Chekodzero Dzevanhu?
Bumbiro renyika ndiwo mutemo mukuru unotsanangura kuti nyika inofanira kutongwa nenzira ipi. Mutemo mukuru wekodzero dzevanhu unowanikwa muChitsauko 4 cheBumbiro reNyika. Chitsauko ichi chinopa kodzero dzinofanira kupiwa vanhu vomuZimbabwe.
Kodzero ndezviya zviga zvatinongowana pamusoro pekuti tiri vanhu. Kodzero dzakapiwa muChiga cheKodzero dzevanhu ndidzo kodzero dziya dzinotsigirwa nemitemo. Mitemo ingada kubvisa kodzero idzi haingabvumidzwi kuvepo kunze kwekuti Chiga cheKodzero dzevanhu chichizvitendera. Kana iripo mitemo nechekare inobvisa dzimwe kodzero dziri muChiga cheKodzero inotonzi haishandi, kana kodzero dziri mubumbiro dziikasatevedzerwa, munhu anogona kukwira kumatare edzimhosva kuti ndambunyikidzwa kana kuinda kuDare rinobata nezveBumbiro renyika kuti anoongororerwa chichemo chake kuti chigadziriswe.
Chiga cheKodzero dzevanhu chiri mubumbiro idzva renyika chine kodzero dzine chekuita nekugarisana kwevanhu nedzine chekuita nematongerwo enyika uye kodzero dzezveupfumi, kugarisana netsika dzemagariro edu. Chiga ichi chinobatawo kodzero dzenzvimbo dzatinogara uye zvakatikomberedza, zvingava zvimerwa kana zvimwewo zviri muvhu. Kodzero dzine chekuita nekugarisana kwevanhu nedzine chekuita nematongerwo enyika ikodzero dzinowana mugari wese agere munyika zviri pamutemo. Kodzero idzi dzinodzivirira munhu kuti asashungurudzwe nehurumende, vamwe vanhu kana mamwe mapoka. Dzinopawo munhu mukana wekupinda muzvirongwa zvechigarisano kana matongerwo enyika pasina rusaruro kana kumbunyikidzwa. Miienzaniso yekodzero dziri muchikwata ichi ndedzinoti:kodzero yokurarama, yokusununguka, yokusaitirwa zvinorwadzisa muviri, yekutaura zvaunoda wakasununguka, yekuungana nekudyidzana nevanwe uye yekupinda mune zvematongerwo enyika. Kodzero idzi ndidzo dzinonzi kodzero dzedamho rekutanga nekuti ndidzo kodzero dzakatanga kuzivikanwa.
Kodzero dzine chekuita neupfumi, chigarisano uye tsika nemagariro dzinonangana nezvinofanira kuwanikwa nemunhu wese zvakaita sekodzero yokuwana basa, pokugara, chikafu, utano, dzidzo uye mutauro wako waamai. Kodzero idzi dzinonzi kodzero dzedanho rechipiri nokuti dzakazocherechedzwa mushure medziya dzekutanga. Kodzero dzehumwe, idzo dzinonziwo kodzero dzedanho rechitatu dzinosanganisira kodzero yebudiriro, runyararo nepekugara pakanaka.
Kodzero, zvaunotarisirwa kuita nekuitira vamwe zvinofambidzana. Umwe neumwe anotarisirwa kucherechedza kodzero dzevamwe vake. uye anokarirwa kutevedzera bumbiro nemitemo yeZimbabwe. Nekudaro, dzimwe kodzero dziri muChiga cheKodzero dzakanyorwa nenzira yekuti zvido zveruzhinji zvinochengetedzwa uye kuti hazvikanganisi kodzero dzevamwe.
Simplified Version of the Declaration of Rights - Shona.pdf